I-Ritinha's Rustic Chalet - I-Airbnb
I-Ritinha's Rustic Chalet
Itamonte, Minas Gerais, i-Brazil
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Ritinha
U-Ritinha Ungumbungazi ovelele
Itholakala esifundeni sasemakhaya saseCampo Redondo, umasipala wase-Itamonte mg. I-Ritinha's Rustic Chalet ilungele labo abafuna ukubalekela ukuxhamazela kwedolobha, befuna ukuphumula, ukuthula, ukuthula nokuxhumana nemvelo. Ngaphandle kokushiya ngaphandle imfudumalo yomuntu ukuthi le ndawo inikeza.
Ngokubukeka kwe-rustic kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo yesimanje ene-hexagonal shape, i-chalet inendawo eyingqayizivele, enenduduzo ephelele nokusebenza ngaphakathi. Ngophahla lwengilazi kuvulandi okwenza kube kanjalo kodwa kubukeka kahle ebusuku basebusika lapho isibhakabhaka sikhazimula khona ngengilazi emnandi yewayini.
I-Bairro Campo Redondo itholakala endaweni engamamitha angu-1500 ukuphakama.
Amakhilomitha angama-32 ukusuka e-Itamonte, phakathi kwamapaki amabili abalulekile: iSerra do Papagaio State Park kanye ne-Itatiaia National Park. Okungaphansi kukamasipala wase-Itamonte, MG.
Eduze kobuciko bemvelo, impophoma ye-fragaria ecishe ibe ngamamitha ayi-100 ekwindla iwukuheha ukuhambisana nokuhlala, okwenza uhambo lwebanga elingu-1 km okungenani. Ngamakhilomitha angaphezu kuka-4 ungakwazi ukujabulela uMfula i-Aiuruca odlula eFagaria, idolobhana eligcwele izintelezi.
Njengoba usendaweni eyindilinga, ufinyelela emakethe futhi awudingi ukuhamba ngemoto, ukwazi nokuhamba ngezinyawo ngoba iseduze ne-chalet, ngakho-ke ungaphumula kalula njengendawo yokudla.
Ngazalelwa eCampo Redondo umndeni wami wonke usuka lapho, kodwa ngihlala e-Visconde de Mauá, ngizohlala ngitholakala ku-watzap nganoma yimiphi imibuzo nanoma yiziphi izimo eziphuthumayo ukuze ngizame ukuyixazulula ngendlela engcono kakhulu futhi ngokushesha ngangokunokwenzeka!
Ngazalelwa eCampo Redondo umndeni wami wonke usuka lapho, kodwa ngihlala e-Visconde de Mauá, ngizohlala ngitholakala ku-watzap nganoma yimiphi imibuzo nanoma yiziphi izimo eziphuth…
URitinha Ungumbungazi ovelele